Ukuphrinta kwesikrini / ukuphrinta ezingutsheni → Ukuphrinta kwesikrini sobungcweti kwezingubo
Ukuphrinta kwesikrini ingenye yezindlela zokumaka ezidume kakhulu ezivame ukukhethelwa zona izikibha zokukhangisa, ihembe noma amanye amagajethi wokukhangisa anjenge izikhwama noma ofeleba. Lolu hlobo lokuphrinta lusebenza kahle kakhulu ezindaweni ezinkulu nezisicaba kanye nezindwangu ezincane, ngokungafani ukugqokwa kwamakhompyuthaenconyelwa imidwebo emincane nezinto zokwakha ezishuba kancane nezisindayo.
Ukuphrinta kwesikrini - ekahle ngemidwebo emikhulu ezindaweni ezicabalele
I-Graphics, ama-logo noma imibhalo eqoshiwe eyenziwe nge-high-quality screen screen ngeke imelane nokusetshenziswa kuphela, kodwa futhi nokugeza emazingeni okushisa aphezulu. Kuyindlela eyonga izindleko yokumaka maqondana nekhwalithi yayo. Ukuphrinta kwesikrini kusetshenziswa isikrini, lapho upende usakazeka phezu kwawo wonke umugqa ngensingo kadokotela. Upende oshaya indwangu ubopha unomphela bese ungena kuwo.
Ithimba lethu linikeza noma iyiphi ilogo noma umbhalo usebenzisa ukuphrinta kwesikrini.
I-Matrix yokuphrinta kwesikrini
Imibala ehlukahlukene yokuphrinta kwesikrini
Inzuzo enkulu yokuphrinta kwesikrini yikhono lokwenza ihluzo kuyo yonke imibala. Lapho wenza ukuphrinta ezingutsheni, ihluzo ku-w imibala ejulile necacile.
Inzuzo eyengeziwe inketho yokufiphaza. Amapende angahlanganiswa nomunye nomunye. Izinhlelo zamakhompiyutha ezinikezelwe enqubeni yokuxubeka ngopende zibalela ngokunembile igrama ye-pigment edingekayo ukwenza umbala oqonde kakhulu ozosetshenziswa kumkhiqizo.
Ukuphrinta kwesikrini kuyamelana nokuwashwa, kungagezwa ngemishini yokuwasha okuzenzakalelayo ngenketho ye-spin. Isimo ukuphrinta okufanelekile ngazo zonke izinqubo zokukhiqiza nopende abasezingeni eliphakeme.
I-T-Shirt enehluzo eziphrintwe ngesikrini
Intengo yokuphrinta kwesikrini incike ekusakazeni
Izindleko zokuphrinta kwesikrini zincike emzameni. Kungakho kungcono ukuyikhethela ama-oda amakhulu. Ukulungiswa kwe-matrix kuyizindleko ezihleliwe, ezizimele ngomzamo.
Futhi, uma singathanda ukwenza isiqeshana sesilingo sesikibha noma isikhwama, kufanele sicabangele izindleko Ukulungiselela i-matrix. Ngale ndlela yokuphrinta, umbala ngamunye usetshenziswa ngokwehlukana, ngesikrini esehlukile.
Kuhilela ukulungiselela i-matrix ehlukile yombala ngamunye. Noma kunjalo, akunandaba kangako ngemizamo eminingi. Isebenza kahle kakhulu ngama-oda amakhulu emicimbi yezemidlalo, imiklomelo yemincintiswano noma amaqembu amaningi abasebenzi.
Ukuguquguquka kokuphrinta kwesikrini
Ukuphrinta kwesikrini kudinga ukuthandwa kwayo ngokuhlukahluka kwayo okubanzi, kungasetshenziselwa ukumaka ukotini nezinto zokwakha zepulasitiki, ngisho nokumaka izinkuni. Ukuphrinta kwesikrini kuvame ukukhethwa ngezingubo zokugqoka nezokukhangisa. Ukuphrinta kuyamelana nokulimala kwemishini, ukukhanya kwelanga nomswakama.
Sikumema ukuba ubambisane nathi inkampani unolwazi lweminyaka eminingi wokumaka ezokukhangisa nezingubo zomsebenzi. Sine imikhiqizo ehlukahlukene, futhi iqembu lethu lizojabula ukukusiza ukhethe nokuthi uzophrinta kanjani.
Ilogo IzikibhaIzikibha eziphrintiweukuphrinta kuzikibhaphrinta ezingutsheniumbhalo wezinguboizingubo ezinelogoizingubo ezinokuphrinta kwesikriniizingubo ezinelebulaAma-Polos anegamaukuphrinta isikriniukudluliswa kwe-thermoizingubo ezinokuphrinta